News | क्यान्सर
News | Tag: क्यान्सर
एजेन्सी । आँखामा क्यान्सर हुन्छ भन्ने सामान्य जनचेतनासम्म नहुँदा यस्ता समस्या भएका बालबालिका बढिरहेका छन् ।
एजेन्सी । क्यान्सरका कारण विश्वभर हजारौँ मानिसहरुको ज्यान जाने गरेको छ । यो रोगको समयमा नै उपचार हुन नसक्दा धेरै मानिसहरुले अकालमा ज्यान पनि गुमाएका छन् । सुरुका चरणमा यो रोगको उपचार सही तरिकाले गर्न सकिए बच्ने सम्भावना बलियो रहन्छ । दैनिक खानपानमा हुने गडबडी, चुरोट सेवन लगायत विभिन्न कारण क्यान्सर हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
यस कारण हुन्छ नाक, कान र घाँटीको क्यान्सर !
सामान्यतया शरीरको कुनै भागमा कोषिकाहरु अनियन्त्रित भएर बढ्नुलाई क्यान्सर भएको मानिन्छ । नाक, कान र घाँटीमा पनि विभिन्न समस्याका कारण क्यान्सर हुने गर्छ । सुरुवाती चरणमै उपचार नगर्ने तथा प्राय शल्यक्रिया गर्नुपर्ने विरामी धेरै हुने भएकाले नाक, कान र घाँटी क्यान्सरका चर्चा ज्यादै कम हुने गरेको छ ।
प्याज खाने गर्नुहोस , यसबाट मज्जाले फाइदा लिनुहोस
एजेन्सी । तपाइमा भर पर्छ प्याजलाई काँचै खाने की पकाएर खाने । यदि तपाइले काँचो प्याज खानुभयो भने यसमा भरपुर मात्रामा अर्गानिक सल्फर पाइने गर्छ । जसको धेरै मात्रामा फाइदा रहेको छ । यसका साथै पकाइएको प्याजमा फाइबर तथा कपरको मात्रा पाइन्छ । जसले पाचन प्रक्रिया तथा मस्तिष्कको विकास गर्छ । यसै प्याजबारे अनेकौं फाइदाबारे जानकारी लिऔं ।
बोनम्यारो क्यान्सर पीडित दीक्षितलाई आर्थिक सहयोग
लमजुङ । बेँसीशहर नगरपालिका–९ स्थायी ठेगाना र हाल चण्डीडाँडा–७ की बोनम्यारो क्यान्सरपीडित १९ वर्षीया सुष्मा दीक्षितलाई आर्थिक सहयोग गरिएकोछ ।
एक सय भन्दा बढीमा पाठेघरको क्यान्सर, २८ मा आङ खसेको पाइयो
किन हुन्छ ग्रामीण भेगका अधिकांश महिलामा स्तन र पाठेघरको क्यान्सर ?
चौतारा । रोग लागेर अशक्त नभएसम्म स्वास्थ्य परीक्षण नगराउने ग्रामीण भेगका अधिकांश महिलामा स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सर फेला परेको छ ।
क्यान्सर पीडित माेनिकाकाे लागि दश दिनमै उठ्याे दुर्इ लाख सहयाेग (समाचार प्रभाव)
गोरखा । क्यान्सर पीडित मोनिका रानाको उपचारका लागि सहयोग रकम जुट्न थालेको छ ।